နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ဒါလီနှင့် နာရီ (၁)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:20 AM
khin oo may May 24, 2009 at 2:48 AM
(ဒါလီသည် ဘတ်စကား၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထိုင်နေသည်။ ဘယ်ဘက်လက်ကို ပြတင်းဘောင်ပေါ် တင်ထားသည်။ )
khin oo may May 24, 2009 at 2:50 AM
khin oo may May 24, 2009 at 2:54 AM
mae May 24, 2009 at 4:21 AM
ဒီစာအုပ်ရှိတယ်၊ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ပါလား? အစုတ်ပလုတ်ရည်းစားတွေပဲ ကြုံနေတဲ့ တရုတ်မသူငယ်ချင်းလေးတွေ ဖတ်ခိုင်းချင်လို့
အိုက်ခီလောက် May 24, 2009 at 5:31 AM
“ကိုကို မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ မှတ်မိတယ်”
ဒါလေးတော့ သဘောအကျဆုံးပဲ ပီအိုက်ရ
နာရီပါသွားတာတောင် သူ့ ကသူ့ ကိုကို မမေ့ဘူး
:P May 24, 2009 at 10:17 AM
:P May 24, 2009 at 10:19 AM
စို... စို နာရီ ဖစ်နေဒယ် ကိုဘ...
p နဲ့ o မှားရိုက်တယ် ထင်တယ်..။
juli May 24, 2009 at 12:12 PM
JuneOne May 24, 2009 at 12:58 PM
ဝက်ဝံလေး May 24, 2009 at 3:51 PM
ဖတ်ဖူးတယ် ko boyz ရေ မင်းလူဆိုရင် အရမ်းကြိုက်လွန်းလို့ ဆက်ရေးပါဦး ပြီးရင် အိမ်လာခဲ့ဦး သိလား ဘိုင်
မီးမီးချစ် May 25, 2009 at 1:07 AM
နာရီအစုတ် နဲ့ မကောင်းတဲ့ရည်းစား အကြောင်းလားဟင်..
သိသလို မသိသလို ဖြစ်နေလို့
Ko Boyz May 26, 2009 at 10:57 AM
မင်းလူရဲ့ ၀တ္ထု အဟောင်းလေးပါ။ မီးမီးချစ်ပြောတဲ့ နာရီအစုတ်နဲ့ အတ္တကြီးတဲ့ ချစ်သူ တစ်ယောက် အကြောင်းပါ။ လေးဖြူရဲ့ ဒါလီနေ့ သီချင်းကို နားထောင်ရင်း ဒါလီ၊ နာရီ ဆိုတာ သတိရလာတာနဲ့ အဲဒီ မင်းလူ ၀တ္ထုကို ကောက်ရိုက်လိုက်တာပါ။ ဖတ်ရတာ လွယ်သလောက် ပြန်ရိုက်ရတာ ပင်ပန်းတယ်။ ရိုက်ထားလက်စ တွေ မကုန်သေးတာမို့ အကုန်ရိုက်ပြီးမှပဲ ပြန်တင်ပေးဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေပါတယ်။
ဒီကြားထဲ ခရီးတစ်ခု ၃ ပတ်ကြာ ထွက်ဖြစ်ဦးမှာမို့ ဘလော့ဖက်ကို ခြေဦးမလှည့်နိုင်သေးဘူး ထင်ပါတယ်။
Anonymous October 27, 2009 at 7:39 PM
memeelay November 3, 2009 at 6:26 AM
please continue when you are done typing. Thanks.